Imali Yezisetshenziswa - Abenzi Bezigidi
Ukuxhasa ngemali imishini yakho kukuvumela ukuthi ulondoloze imali yakho ngezidingo ezahlukahlukene zebhizinisi. Sinethiwekhi eqinile nokuxhumana nezikhungo zezezimali ngezidingo zakho zezimali zemishini! Ngokungafani nenkampani ejwayelekile yokuxhasa ngezimali imishini, ozakwethu ebhizinisini banezinhlelo zokuqalisa futhi basungula amabhizinisi anesikweletu esihle. Imvamisa, izinkampani ezixhasa ngezimali zensimbi zidinga ubuncane bezinyanga eziyisithupha ebhizinisini ukuze kubhekwe ukuthi abaqokiwe bakulungele yini ukufaka uxhaso lwezimali yize kungabhekwana nazo ngokubambisana kwethu ngalokhu. Ifemu yokuxhasa ngezimali imishini engcono kakhulu ngeke ikugcine ulindile, zizothola ithuba lokusiza izidingo zakho zezezimali ngokushesha okukhulu!
Ukuxhaswa Kwezimali Zomsebenzi:
Ukuqashisa noma Ukuthenga
Okusha noma okungumnikazi wangaphambili
Thengisa - Buyela emuva
Izindleko Ezithambile Zezimali
Sisebenza noMthengisi wakho futhi
Amanani Amanani aphansi Ukukhokhwa okuguqukayo Akukho Imali Efihliwe
Senza ngokwezifiso imali yezisetshenziswa indlela ukulingana kahle izidingo zakho zesabelomali kanye nokugeleza kwemali, ngokusebenzisa uhlu olukhulu lwezinketho zezimali nezokuqashisa. Ukuxhaswa ngezimali ngokushesha okungamahora angamashumi amane nesishiyagalombili.
Imali iyatholakala ngemishini eshiwo ngezansi
Ukusingathwa nokusebenzisa kabusha amaloli
Amaloli we-Pumper / Vacuum
Tow amaloli / iqhwa leqhwa
Ukulahla & Crane Bodies
Amaloli Womzimba Wenkonzo
Amaloli alula, aphakathi nendawo, anesisindo esikhulu
Ezokwakha / i-Lawn / Turf Equipment
Ama-Sedan / Vans / fleets / Ambulensi / Paratransit
Ama-Kiosks / RMU's
Izitolo Zokuthengisa / AmaKiyo / ama-RMU`s / nokukhombisa kweholide
Itekisi / i-Limo ​​/ i-Livery
Umqeqeshi wezimoto / Ibhasi leMini / Ibhasi lesikole
Izinsiza zeHhovisi nefenisha
I-IT kanye Nezinsimbi Zocingo
Izindiza, Izitimela Nezikebhe